Tarreewwan yookiin sarjaawwan kan maadheelee qabatan wabeeffachuuf maadheelee barruu wajjinii fayyadamuu dandeessa.
Wardii fakkeenyaa keessatti, diraa 'sarjaa tokkoffaa' foormulaa keessatti hammanga man'ee B3 hanga B5, yookiin 'sarjaa lammaffaa' hammanga man'ee C2 hanga C5 wabeeffachuuf fayyadamuu dandeessa. 'Tarree tokkoffaa' hammanga man'ee B3 hanga D3 dhaaf, yookiin 'Tarree lammaffaa' hammanga man'ee B4 hanga D4 dhaafis fayyadamuu dandeessa . Bu'aan foormulaa kan maqaa man'ee, fakkeenyaaf, SUM('sarjaa tokkoffaa') fayyadamu, 600 dha.
Title is: Maqaalee akka teessessuutti beekuu